Misy karazany maro izany ary misy ny fitsinjovana ny vody andro merika sy ny mety ho loza tsy ahafaha-mihetsika tahaka ny tranga misy manerantany amin’izao fotoana izao. Mihena hatrany amin’ny 50% ny vola mihodina (chiffres d’affaires) amin’ny ankamaroan’ny seha-pihariana rehetra ankehitriny. Raha ny amin’ireny hotely fandraisam-bahiny goavana ireny dia 100% ny fatiantoka ary tena mitotongana ny vola mihodina. Mampanotany tena hoe manao ahoana ny fahafahan’ny kaomaniam-piantohana hamerina ny fatiantoka amin’ireny, araka izay endri-pifanarahana natao, indrindra ho an’ireo mpanara-dalàna izay mandoa tsy tapaka ny latsakembony? Mety ho voavaha ihany ny olana any amin’ny firenena manankarena izay afaka hidiran’ny fanjakana an-tanana saingy atahorana hatrany izany rah any eto Madagasikara. Hatreto mantsy dia mbola maro aza ireo tsy nahazo ny volany tamin’ny kaompaniam-piantohana tamin’ireny krizy tamin’ny 2009 ireny.